प्रदिप खड्का स्टारर फिल्मको नाम परिर्वतनFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
प्रदिप खड्का स्टारर फिल्मको नाम परिर्वतन
फिल्मी फण्डा । फिल्म रोजीको नाम परिवर्तन गराई रोजीबाट रोज राखिएको छ । गोबिन्द महर्जन र उनकी श्रीमती नानीमैया महर्जनको आफ्नो स्व. छोरी रोजी महर्जनको हत्या घटनासँग फिल्म रोजीको कथा परिवेश मिलेको भन्दै पटक पटक सो फिल्मको नाम रोजी राख्न नदिएपछि निर्माण टिमले फिल्मको नाम परिवर्तन गरी रोजीबाट रोज रादिएको हो ।
गत बिहिबार चलचित्र विकाश बोर्डमा निर्माता निर्देशक निकर पौडेल, निर्माता मणिकरण केसी र मृतक रोजी महर्जनको परिवारबाट गोबिन्द महर्जन एवम नानीमैया महर्जनबीच भएको बार्तामा आफ्नो छोरीको मृत्यु घटनासँग सम्बन्धित फिल्मको कथा मिलेको मर्हजन परिवारले दाबी गरे । त्यसपछि निर्माण पक्षले फिल्मको नाम रोजी नराख्ने, चलचित्र सत्य घटनामा आधारित रहेको भन्ने उल्लेख नगर्ने सम्झौता भएको हो । यस्तै महर्जन परिवारले पनि आगामी २२ भदौमा प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रलाई कुनै पनि प्रकारको बाधा नपुर्याउने सम्झौता भएको छ ।
निरक पौडेलको निर्देशन रहेको फिल्ममा प्रदिप खड्का, मिरुना मगर, कर्मा शाक्य, बरुण आरएल राणा, रविन्द्र खड्का, प्रकाश श्रेष्ठ, पल्पसा डंगोललगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । उद्धव पौडेल प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्ममा राजु विक्रम थापाको छायांकन र मित्र डि गुरुङको सम्पादन रहेको छ । गोपीकृष्ण मुभिज र आरोही इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्मित यस फिल्मका निर्माता आयरा पौडेल र आरोही केसी हुन् । फिल्मको कथा केदार भुषालले तयार पारेका हुन् । फिल्म आँउदो भदौ २२ बाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ ।